တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်း ...
၁။ ကျနော်တို့ရဲ့ အမှားတွေထဲမှာ သတ်ပုံမှားတာက အများဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ခုခေတ်ကလေးတွေများ တယ်ကံကောင်း၊ ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်
အထူးမွမ်းမံသင်တန်းကြီးတွေ ရက်ရှည်တက်ကြရတာမို့ သူတို့က သတ်ပုံမမှားတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါရဲ့။
၂။ မမေရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဒီနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ သတ်ပုံမှားတဲ့အကြောင်းတွေ ရေးထားတယ်။ ရှစ်တန်းစာအုပ်အဖုံးကိုလည်း ပုံဖတ်ပြီးတင်ထားတယ်။ အဖုံးမှာ အဋ္ဌမ မဟုတ်ဘဲ အဌမဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဗျာ။ အဖုံးမှာသတ်ပုံမှားသလို အတွင်းကဗျာ နဲ့ ခက်ဆစ်အဖွင့်ထဲမှာလည်း စာလုံးပေါင်း အမှားအယွင်း တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုတယ်။
၃။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်တယ်လို့ စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားပေမယ့် အဲဒီသတ်ပုံအမှားတွေဟာ အစိုးရမင်းတွေမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျနော်တော့ မထင်ပါဘူး။ သုံးထားတဲ့စာရွက်အသားတွေ မကောင်းဘူးဆိုတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမားတွေရဲ့လက်ရာဖြစ်မှာပေါ့။ စီးပွားရေးသမားတွေဆိုတော့လည်း သူတို့မှာ သတ်ပုံစစ်တဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။
၄။ ကျနော်ထင်တာက ဒီလိုဗျာ၊ နိုင်ငံတော်မှာ တံတားတွေဆောက်တာ များသွားတော့ ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ်တွေ လိုအပ်သလောက် ပုံနှိပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့ငယ်တုန်းက တံတားတွေမဆောက်တုန်းကလည်း ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ်ဆိုတာ မလောက်ပါဘူးဗျာ။ ၁၉၇၉ ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ကျနော် ၄တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ် ဖတ်စာအုပ်တွေဟာ အဟောင်းတွေပဲ။ (အင်း- အသက်ကို စကားမစပ် ကြေညာသလိုဖြစ်သွားတာ စိတ်မချမ်းသာစရာ။)
၅။ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်က များလာတော့ စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း စာအုပ်တွေ ရိုက်ထုတ်ရပြီပေါ့။ ကျောင်းသားများလည်း ကျနော်တို့တုန်းကလိုမဟုတ်ဘဲ ဖတ်စာအုပ်အသစ်ကိုင်ရ၊ စီးပွားရေးသမားများလည်း ပိုက်ဆံရ။ ဟုတ်နေတာပဲ။ သတ်ပုံမှားတာကတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး။ စာပေစိစစ်ရေးဌာနကို မတင်ဘဲ ထုတ်တာမို့ သတ်ပုံအမှားတွေ ပြင်ပေးသူမဲ့သွားတာလို့လည်း ဆိုနိုင်ပေတာပေါ့။ (ကဲ- မှတ်ပလား၊ စာပေကင်ပေတိုင်ရုံးဆိုပြီး သရော်ချင်ဦး။)
၆။ အင်း- မှတ်ချက်ရေးတာလည်း များသွားပြီ။ နောက် ကြုံမှပဲ ထပ်ပြီး မှတ်ချက်ပေး လေရှည်ဦးမယ်ဗျာ။ သတ်ပုံမမှားအောင်လည်း ဂရုစိုက်ဦးမှ။ မှားရင် မှတ်ချက်ကို မှတ်ချက်ပြန်ပေးခံရနိုင်တယ်။
၇။ မမေရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ကိုမောင်မောင် ရေး(တယ်လို့ယူဆရ)တဲ့ နေညိုချိန်အတွေး သီချင်း တင်ဖူးတယ်မဟုတ်လား။ ကျနော်လည်း အဲဒီသီချင်း ကြိုက်သဗျာ။ လူငယ် လူလွတ်ဘ၀တုန်းက ဆိုခဲ့အော်ခဲ့တဲ့သီချင်း။ အဲဒီသီချင်းကို မမေ ပြန်ကူးထားတာ စာကြောင်းတစ်ကြောင်း မှားနေသလားလို့။ မမေ မမှားဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်မှားတာပဲ။ နေညိုညိုရေ သားမွေးမယ့်မြက် ရေလိုနေဆဲပါ စသဖြင့် - - ။ အဲဒီသီချင်း စာသားတွေက အင်မတန် ကောင်းတာပဲ။ သံစဉ်လည်း ကောင်း။
၈။ ဒီသီချင်းဟောင်းကြီးကို ကြိုက်တယ်ဆိုကတည်းက သူများတွေ ကျနော့်အသက်ခန့်မှန်းလို့ ရမှာပဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ ခက်တာပဲ။ ရှက်စရာမဟုတ်ဘဲ ရှက်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်။
မမောဓာဝီ ကွန်မန့် ကနေ ပဲ ကျွန်တော့်ကိုဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ…
မမောဓာဝီ တင်ပြချက်များသည် အမှန်တရားများနှင့်ပြည်သူ ရဲ့ ရင်ထဲကစကားများကိုယ်စားပြုထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ရာသီပေါ်သီးနှံလိုရောင်းကုန်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ professional ဆန်သည်ဆိုသည့် တိုင်အောင်ကျောင်းသားဟောင်းဆိုသူရဲ့ တိုက်ခိုက်သည့်စကားလုံး အတိုင်းဘလော့ဂရေးသူအများစုသည် ကြေးစားမဟုတ်ပါ။
မိမိသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာကျွမ်းကျင်သော တတ်သိပညာရှင်များအနေဖြင့် သာပြင်ပလောကတွင် professional အဖြစ်ရပ်တည်ပါသည်။ ဘလော့ ဂရေးသဖြင့် ပို့ စ များအတွက် ငွေကြေးမရပါ။.
ငါးပွက်ရာ ငါးစာချကြေးဆို ခေတ်ကိုကိုယ်စားမပြုတဲ့နာမည်ကြီး စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ချို ဆီမှာသွားပြောစေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထောက်ပြတင်ပြသွားပါမယ်။
နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်ကြုံတွေနေရတဲ့ ဘ၀အရေးများသာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက် ကိုထောက်ပြ တိုင်း ပြည်သူများရဲ့ လိုအပ်ချက် ပြသနာများ ကိုတင်ပြတိုင်း နိုင်ငံသားတိုင်းအရေးဖြစ်ပါသဖြင့် နိုင်ငံရေး လို့ ခေါ်နိုင်ပါသည်.။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး သမားမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေး ဘာလဲဆိုတာသေချာသိချင်လျင်တော့ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ မှ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံရေး ပို့ စ ကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ် ဆိုတာ မည် သည် လုပ်ရပ်ကိုရည်ညွန်းပါသလဲ။ ဘာကိုဆိုလိုချင်ပါသလဲဆိုတာ မည်သူမှနားမလည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အနေ နဲ့ တော့ အင်မတန်မှအထက်တန်းကျလှသော အမှန်တရားများ အရှိတရားများကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်းလို့ ပဲမြင်ပါတယ်။
နာမည် ကြီးဖို့သက်သက်အတွက် ဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ဥပမာပြရလျင်တော့ ငါးမင်းဆွေ ဆိုတာ အင်မတန် နာမည်ကြီးပါတယ်။
မမေဓာဝီနှင့် ကျွန်တော်လူချင်းမသိပါ။ အမည်မပါသောကျောင်းသားကျောင်းသား ဟောင်း ရဲ့ ဝေဖန်ချက်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး
တိုက်ခိုက်မှုသက်သက်ဟု သာ မြင်မိသဖြင့် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမည်ပါသော တက်ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်း (အစစ်)
9/01/2007 1:07 PM
အစ်မ။ ကျနော့ ဘလော့ကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်တွေ ရေးသားခဲ့လို့ နအဖ လူလို့ စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို လက်ခံမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၀င်ကြည့်နေသူပါ။ အမရဲ့ပို့စ်တွေကိုဖတ်ပြီးရင်၊ ရင်ထဲမှာတစ်ခုခု ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ အမရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရင်း လေးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။
အမစာတွေဖတ်တာများလာတော့ အမရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်း မှန်းဆမိသူတစ်ယောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကွန်မန့်တော့တခါမှ ၀င်မရေးဘူးပါဘူး။
ကျွန်တော်ကအင်တာနက်ယူဇာချာတိတ်တစ်ယောက်ပါ။ အမရေ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သာဆက်လျှောက်ပါ။ ဘာမှဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။ သူရေးထားတာကြည့်ရတာတစ်ယောက်ယောက်က
9/01/2007 5:10 PM
ဟာအကောင်းမြင်စိတ်လေးများနှမ်းစိလောက်တောင်မထားတတ်ကျဘူးလို့ မြင်မိတယ်၊ လက်ရှိအစိုး၇ကိုလည်းအ၇မ်းကောင်းတယ်လို့ တော့မမြင်မိဘူး ။ အုပ်ချုပ်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေကေ၇ာ သူတို့ ရှိ၇မယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ကောင်းကြ၇ဲ့ လား ။ တာဝန်ကျေကြရဲ့ လား လို့ မေးချင်တယ်။ ဘေးထိုင်ဘိုင်ကျပြီးကိုယ်ထင်၇ာကိုမျက်စိမှိတ်ဘုပြောနေကြသလားလို့ ပါ
9/02/2007 9:51 AM
မမေကနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးလို့ ပြောပေမဲ့ တကယ်တမ်းမှာ တော့ယုံကြည်ရာ တစ်ခုကို စာပေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတယ် လို့ တော့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ခံယူထားတယ်မဟုတ်လား၊ ကျေးဇူးပြု ပြီးကိုယ်ကိုကိုယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်တို.၊ ဦးချစ်မောင်တို့ နဲ့ တော့မနှိုင်းလိုက် ပါနဲ့ ၊ သူတို့ ကတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကိုအနစ်နာခံကိုယ်ကျိုးစွန့် ပြီး
တော့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြတဲ့သူတွေပါ၊ မမေလို ပုဆိုးချုံထဲကလက်သီးပြနေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ တတယ်လုပ်ချင်၇င် ကျောင်းသားဟောင်းပြောသလို လမ်းမပေါ်သာထွက်ခဲ့ပါတော့ စောင့်ကြည့်ပြီး လက်ခုတ်တီးပါမယ်။
9/02/2007 10:30 AM
ဘလော့ဆိုတာလွပ်လွတ်စွာ ရေးခွင့်ရှိတယ်ကွ။ ခင်ဗျားက အားအားယားယား သူများဘလော့လည်းကြည့်သေးတယ်၊
ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းလုပ်သေးတယ် ဆိုတော့ တော်တော်ယဉ်ကျေးမှုမရှိတာပဲ။ ခင်ဗျားမှာ ကိုယ့်ဘာသာယုံ
ကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင် ဘလော့လုပ်ရေးပါလား။ သူများတွေကိုလိုက်မဝေဖန်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားဘယ်သူလည်း ဘာလဲဆိုတာလည်း
မသိချင်ဘူး။ ဘလော့ရှိလား မရှိလားလည်းမသိဘူး။ မမေက သူ့ဘလော့မှာသူရေးတာ။ သူများတကာဆီလိုက်ဝေဖန်နေတာ
9/02/2007 1:14 PM
anonymous သို့ 
မမေကလူတွေဖတ်စေချင်လို့့ဘ လောက်ပေါ်မှာေ၇းတာလေ။ ဒါဆို၇င်ဝေဖန်လို့ လဲ၇၇မှာပေါ့ 
သူတောင်မှဘဲ သတင်းစာကို ဝေဖန်သေးတာဘဲဟာ။
အားတဲ့အချိန်လေးမှာ ၀င်ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်ထဲပေါ်လာတာ
လေးေ၇းခဲ့မိတာပါ၊ ဘလောက်ေ၇း၇လောက်အောင်လဲ
ကိုယ်ကိုကိုယ် စာေ၇းကောင်းသူလို့ မထင်မိတာ၇ယ်၊ အချိန်တွေလဲပိုမနေတာ၇ယ်ကြောင့်မေ၇းနိုင်ပါဘူး။ ဝေဖန်ေ၇းကိုမကြိုဆိုချင်ဘူးဆို၇င်တော့လည်းတမျိုးပေါ့
အဲဒါဘဲကြည့် လေ၊လူ့ သဘာဝ ဘဲ ကိုယ်ကသာသူများအပြစ်တွေထောက်ပြမကောင်းပြော၇
တာကိုမွေ့ လျှော်တာ ၊ ကိုယ့်ကိုပြောလာ၇င်တော့
ကျနော် နည်းနည်းလောက် ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လလောက်က ပို့စ်တခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့တွေ ပြောကြဆိုကြ၊ ဆွေးနွေး ငြင်းခုန်ကြတုန်းက မနေတတ်မထိုင်တတ် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မိတ်ဆွေတယောက် ပြောဖူးခဲ့တာလေးကို ကျနော် အခုထိတိုင်အောင် မှတ်မိသိရှိနေပါသေးတယ်။ မှတ်သားစရာလဲ ကောင်းတာမို့ ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပါရစေ။
၁။စာအတွင်းသားကိုဝေဖန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။(ဥပမာ-ဒီစာတစ်ပုဒ်က ကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ်၊ ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်မကောင်းဘူးကို အကိုးအကားနဲ့ ပြောဆိုပါတယ်။ စာ အပေါ်မှာပဲ ဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ ဝေဖန်ရေးပါ)
၂။စာအတွင်းသားကို ဝေဖန်ဖို့ ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာ ပြင်ပသဘောနဲ့ဝေဖန် ချဉ်းကပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။(ဥပမာ-အယူအဆရေးရာ(သို့မဟုတ်) စာရေးဆရာရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းပါ။ အဓိကကတော့ ဝေဖန်ရေးရဲ့ အဆုံးသတ်က စာပေကို ကောင်းတယ် မကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ထိုကဲ့သို့ ဝေဖန်မှုမျိုးတွေများပါတယ်။ ဝေဖန်ရေးကနေ ပုတ်ခတ်ရေး အသွင်ကို အများဆုံးပြောင်းတာလဲ ထိုဝေဖန်ရေးအမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်းအမြင်နဲ့ပြောပါရစေ။)
အထက်က အပိုဒ် ၁ နဲ့ ၂ ဟာ အဲဒီ မိတ်ဆွေ မှတ်ချက်ပေးသွားဖူးတဲ့ စကားလေးပါ။ ဒီတော့
စာပေဝေဖန်ရေး လုပ်တာဟာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ ပုတ်ခတ်ရေးကတော့ မကောင်းပါဘူး။
နောက်တခု ကျနော် သတိထားမိတာ ပြောချင်ပါသေးတယ်။ မမေဘလော့ဂ်မှာ မမေကို ဝေဖန်ကြတဲ့လူ အတော်များများ (ကိုဖြိုး ကတော့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်ပဲ ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်) ဟာ သူတို့ရဲ့ အမည်ကို ထုတ်ဖော်မပြောကြတာပါ။ ထူးဆန်းစရာ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ ထားလိုက်ပါတော့…။
ယေဘုယျ အခြေအနေအရ သုံးသပ်ကြည့်ရင် ကျောင်းသားဟောင်းဆိုသူရော၊ sit အမည်ခံထားသူပါ မမေရဲ့ စာအပေါ်မှာ ဝေဖန်လိုတာထက် မမေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဝေဖန်လိုတဲ့ သဘော၊ ပုတ်ခတ်လိုတဲ့သဘောက ပိုများပါတယ်။ ဒါဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေသာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရိပ်လက္ခဏာတွေမို့ မကောင်းပါဘူး။ လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာနဲ့ အဲဒါကို ရပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Sit ကို ပြောတဲ့ အမည်မသိ မိတ်ဆွေရဲ့ စကားကိုလည်း ကျနော် အပြည့်အ၀ လက်မခံပါဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ် ကိုယ်ရေးချင်ရာ ရေးနိုင်ပေမယ့် စာဖတ်သူမှာလဲ သူမြင်ချင်ရာ မြင်ပြီး သူဝေဖန်ချင်သလို ဝေဖန်ခွင့်ဆိုတာက ရှိနေပါသေးတယ်။ အရေးကြီးတာက စာတပုဒ်ကို စာသားပါ အကြောင်းအရာကိုသာ ဦးတည်ဆွေးနွေး ဝေဖန်ဖို့ပါ။ ဘယ်နေရာလေးမှာ ရေးသွားတာကတော့ ဘယ်လို လိုအပ်သွားတယ်။ ဘယ်အချက်အလက်ဟာဖြင့် မှားယွင်းနေတယ်၊ စသဖြင့်ပါ။
ဒါပေမယ့် Sit ပြောတဲ့ `ကျေးဇူးပြု ပြီးကိုယ်ကိုကိုယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်တို.၊ ဦးချစ်မောင်တို့ နဲ့ တော့မနှိုင်းလိုက် ပါနဲ့ ၊ သူတို့ ကတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကိုအနစ်နာခံကိုယ်ကျိုးစွန့် ပြီး
တော့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြတဲ့သူတွေပါ၊ မမေလို ပုဆိုးချုံထဲကလက်သီးပြနေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး´ ဆိုတဲ့ လူကို ဦးတည် ပုတ်ခတ်ရေးတာမျိုးကြတော့ မကောင်းပါဘူး။
မမေရဲ့ ဆိုလိုရင်းက ဗိုလ်ချုပ်တို့၊ ဦးချစ်မောင်တို့နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ နှိုင်းလို့တဲ့ သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဆက်စပ်နေတယ်။ အဲဒီလို ဆက်စပ်နေတာဟာကို ဥပမာအနေနဲ့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စာတွေကို လေ့လာရင် သိနိုင်တယ်။ ဒီသဘောပါ။ နောက်ပြီးတော့ မမေက `ငါ့စာကို လာမဝေဖန်နဲ့´ လို့လည်း တကြိမ်တခါမှ ပြောဖူးတာ မတွေ့ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူများကိုသာ ထောက်ပြဝေဖန်တာကို မွေ့လျော်ပြီး ကိုယ့်ကိုပြောလာရင်တော့ သည်းခံနိုင်တာ နည်းပါတယ်လို့ ပြောဆိုစွပ်စွဲဖို့ စောလွန်းပါသေးတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် လူတွေ ဖတ်စေချင်လို့ ဘလော့ဂါတွေ ဘလော့ဂ် ရေးနေတယ် ဆိုတာ သိပ်မှန်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပါ၊ ထောက်ပြပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဝေဖန်ရေးက အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်တဲ့ စာပေဝေဖန်ရေးသာ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စာရေးသူဝေဖန်ပုတ်ခတ်ရေးကိုတော့ အားမပေးပါဘူး။
9/02/2007 3:31 PM
မင်းရဲ့ဝေဖန်ချက်ကို တုန့်ပြန်သူဟာ.. ဘလော့ပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါ…
လူတိုင်းမှာ အမြင်အမျိုးမျိုးရှိသလို… မိမိအမြင်ကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်… ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပြည်တွင်းက စာနယ်ဇင်းတွေမှာ
ထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိလို့… မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့စာမျက်နှာမှာ
ထုတ်ဖော်ကြပါတယ်… သို့ဖြစ်လင့်ကစား… အစိုးမရတဲ့မင်း.. အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ…
နေထိုင်ရသူတွေအနေနဲ့.. ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာ.. သိပ်ကို အန္တရာယ် ကြီးလွန်းပါတယ်.. လမ်းမပေါ်ထွက်လျှောက်သူတွေရော… အိမ်ထဲကနေ အားပေးသူတွေပါ… မလိုရင်မလိုသလို… အကောက်ကြံခံရနိုင်ပါတယ်…
ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်ဟာ… အိမ်ထဲမှာနေသော်လဲ… ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့က လက်လှမ်းမှီတဲ့ မျက်နှာစာမှာ ထုတ်ဖော်ဆန္ဒ.. ရေးသားနေသူမို့… စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရနိုင်တဲ့ အနေအထားထဲမှာ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်…
သို့သော်လဲ… အန္တရာယ်ကို မမှုပဲ မိမိစိတ်သန်ရာကို အမျိုးသားရေးရှေးရှုလုပ်ဆောင်နေတာ
ဟာဖြင့်.. လေးစားထိုက်တဲ့ အရည်အသွေးတရပ်ပါ…
မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှ သူ့လိုမျိုး စွမ်းဆောင်ရဲတဲ့သတ္တိမရှိရင်…
မလေးစားရင်နေပါ… မင်းတို့ပထွေးတွေရဲ့ အသုံးချခံ… စစ်ခွေးဘ၀နဲ့…
သခင်အားရအောင်… လှည့်ပတ်ဟောင်ပြမနေပါနဲ့… ရပ်တန်းက ရပ်ပါ…
ီ ဘလော့ဂါတယောက်က သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သူတင်ချင်တဲ့စာ တင်ခွင့်ရှိသလို လာဖတ်တဲ့လူကလည်း မြင်ချင်သလို မြင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကောင်းတယ်ထင်ရင် ချီးကျူးမယ်၊ အမြင်မတူတာတွေ့ရင် ဝေဖန် ထောက်ပြမယ်၊ အဲဒီအမြင်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ချက်ရေးပြီး ထားခဲ့ချင်ထားခဲ့နိုင်သလို မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်ကနေလည်း ပို့စ်တခုအနေနဲ့ ချေပ တင်ပြခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ။
အမြင်မတူတာကိုဝေဖန်တာ ထောက်ပြတာ ကနေ
စာေ၇းသူကိုပါ ထိခိုက်သွားမှန်း သတိထားမိပါတယ်၊
လက်ရှိအစိုး၇ကိုလည်းမကြိုက်၊ နောင်လာမဲ့အာဏာ၇ပါတီကိုလည်းသဘောမကျ ဒီလိုလူမျိုးတယောက်မို့ ဝင်ေ၇းမိတဲ့ စာတွေက တခြားသူတွေတွက်တော့ ဖတ်၇တာ ဘောင်ဝင်လှမယ် မထင်ဘူး
9/02/2007 4:48 PM
ဟုတ်ပါတယ် Sit .. :)
အဲဒါ ကျနော် ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားပါ။ အဲဒီ အတိုင်းပဲလဲ ခံယူထားပါတယ်။ လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့် ရှိတာကိုး။ ကျနော်တို့ ရေးသမျှတိုင်းက အမှားအယွင်း ကင်းမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကောင်းစေလိုတဲ့ ရှေ့ရှုမှုနဲ့ ဝေဖန်မှုတိုင်းကတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်က စာကို ဝေဖန်ရာကနေ စာရေးသူကိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အရ ထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်တာပါပဲ။ ကျနော်ရေးခဲ့တာတွေကို ဝေဖန်စရာ၊ ထောက်ပြစရာ ရှိရင်လဲ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ Sit ဝေဖန်ထောက်ပြတာက စာရေးသူကို ထိခိုက်သွားမှန်း သတိထားမိတယ် ဆိုတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
9/02/2007 4:57 PM
သဘောကျတာနဲ့ ဒီဖက်မှာလါပို.တာ.... ဖတ်ပြီးသားဆို၇င်တော့လည်းမသိဘူးပေါ့လေ... ဒါမျိုးလုပ်ခွင့်မ၇ှိဘူးဆို၇င်လည်းပြောကြ
ပါ.... နားမလည်လို့ ပါ .....
ကျနော်တို့ဆီမှာပေါ့လေ .....သိပ်မကြာခင်ရက်ပိုင်း လေးတုန်က ဒီဇယ်ဈေးတွေ တက်သွားတယ်ပေါ့ ဒါတွေကို
ဘလောက်တွေပေါ်မှာလဲ အတော်လေးရေးကြတာ တွေ့ ရသားဗျ။ ဘလောက်တစ်ခုကဆိုရင် ဘာပြောသလဲဆို
တော့ ဒါဟာ Boiling frog effect လို ဖြစ်နေတယ် လို့တောင်ပြော ကြတယ်ဗျ။ ဘလော့ရှင် ဆိုလိုချင်တဲ့ သ
ဘော ကတော့ ဗျာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖားလေးတွေဟာ ရေပူမှန်းမသိပူလာပြီး သေသွားရသလိုမျိုးလို့ ဆိုလိုချင် ပုံရတယ်ဗျ။
ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ဒီသီအိုရီကသိပ်မဆိုင်ဘူးလို့ ကျနော်တော့ထင်တယ်ဗျ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ Boiling frog effect ဆိုတာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ဆိုလိုချင်တာ ကို
အခုကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာက လျှပ်တပြက် ဖြစ်သွားတာလေ ။ (ဆက်မရေးခင်ပြောချင်တာက ကျနော် နိုင်ငံရေး သမား မဟုတ်ပါ ဒါကြောင်းယင်ကိစ္စကို နိုင်ငံရေးအရ ဝေဖန်ခြင်း မဟုတ်ပါ တွေးမိတာလေးနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်တာ လေးကို စဉ်းစားပြီးပြောကြည့်ခြင်းပါ) ။
နောက်ပြီးပေါ့လေ ဓာတ်ဆီဈေးတက်တဲ့ ဟာကိုပေါ့ ဘယ်သူတွေက လက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည် ဖြစ်စေ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့လက်ခံနိုင်တယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဓာတ်ဆီဈေးကိုပေါ့လေ ကမာ့္ဘ ပေါက် ဈေးထက် လျှော့ချပြီး ရောင်းနေတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက်အရှုံးပေါ်နေပြီး ဒီင်္လိုဈေးလျှော့ရောင်းခြင်းအား ဖြင့် လူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် အကျိုးရှိနေတာမဟုတ်ဘဲ လူတန်းစားတစ်ခုအတွက်ဘဲ အကျိုးရှိနေတဲ့ သဘော ရှိတယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ဗျာ ကားစီးနိုင်တဲ့ လူတန်းစားအတွက်ဘဲ အကျိုးရှိနေတယ် ။ ကားတစ်စီးကို ဂါလံ (၆၀) ပေါ့ အစိုးရက ပေါက်ဈေးထက်လျှော့ချပြီးထုတ်ပေးတယ်။ တကယ်တော့ ဂါလံ (၆၀) ကုန်အောင်သုံးတဲ့ ကားကနည်းတယ်လေ ။ ဒီတော့ပိုတဲ့ဓာတ်ဆီကိုပြန်ရောင်းတော့ မှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်လာရော။ အခုပေါ့လေ အစိုးရကတက်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ဆီဈေးက အပြင်ပေါက်ဈေးလောက်တောင်မရှိသေးဘူးလေ ဒီတော့ ဓာတ်ဆီဈေး တက်တဲ့ဟာ လက်ခံနိုင်စရာရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ ဓာတ်ဆီဈေးကိုပေါ့ ရုတ်တရက်ထိုးတက်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ နည်းနည်းတော့ ရိုက်ခက် သွားတာပေါ့ ဘယ်လိုရိုက်ခက်သွားသလဲဆိုတော့ Transportation cost တွေတက်သွားတယ် ဒီရိုက် ခတ်မှုနဲ့ တပြိုင်နက် transportation cost တက်တော့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာမယ် ဒီတော့ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ Inflation (ငွေကြေးဖောင်းပွမှု) ဖြစ်လာမယ် Inflation ဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ခုသာခံသာရှိအောင် ကိုင်တွယ်လို့ရနိုင်ပေမယ့် ၀န်ထမ်းပေါ့ ( ကုမ္ပဏီ၊ အစိုးရ ) သူတို့ အတွက်မှာတော့သွားရေးလာရေးကအစ ကုန်ကျစရိတ်တက်သွာတယ် ၀င်ငွေထွက်ငွေ မမျှတာတွေဖြစ် နိုင်တယ် စီပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာတောင် Small business တွေဆိုအထိနာနိုင်တယ် Inflation ဖြစ်လာတော့ Investment ပိုလုပ်ရမယ် ဒီတော့ အရင်းနှီးကို ထပ်မဖြည့်နိုင်ရင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု နှေးကွေးသွားမယ့် သဘောရှိတယ်။ ဒီတော့ အခြေခံကျတဲ့ လောင်စာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုဟာ င်္စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ရိုက်ခက်တဲ့သဘောရှိတယ် Domino effect လို့ဘဲ ဆိုရမယ်နဲ့ တူတယ်နော်။ ဒါပေမယ် ဆူနာမီ effect ဗျ ချက်ခြင်းဖြစ်သွားတော့ဘာ လုပ်လို့လုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်ကုန်တာပြီးတော့ ဒီ wave ကြောင့် အားလုံး Shock ရသွားတယ်လေ။
ဒီတော့ ဓာတ်ဆီဈေးတက်တာဟာ မကောင်းသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုလေးတွေ ဆိုရင်တော့ ပို
အဆင်ပြေနိုင်မလားလို့ပါ နော် အားလုံးဆွေးနွေပေးပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်ထက် စီးပွားရေး သဘောတရားကိုကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလိုချင်လို့ပါ
ကျနော်ကတော့ ဒီလိုကုစားချင်တယ် ဗျ ...........
(၁) အိမ်စီးကားနဲ့ လိုင်းကားတွေ အတွက် ဈေးနှုန်းနှစ်မျိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ နေ့စဉ်ခရီးသွားလာနေကြတဲ့ ကျနော်တို့လိုပြည်သူတွေ အတွက်လည်းအသက်ရူချောင်း တိုင်ပြည်လည်း ၀င်ငွေတိုးပေါ့ ....
(၂) အိမ်းစီကားတွေကို ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဂါလံ (၆၀) ကတကယ်တော့ မကုန်ကြဘူးဗျ ဒီတော့ ပိုတဲ့ ဆီကိုရောင်းစား ကြတယ် ဒီတော့ကြားခံမှောင်ခိုဈေးကွက်ပေါ်လာတယ် မှောင်ခိုကနေမှ တကယ့်စားသုံးသူ လက်ထဲကိုရောက်ရတယ် ဒီတော့အိမ်းနီးနားချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ လောင်စာပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်ပြီးလို သလောက် ရောင်းပေးလိုက်ရင် မှောင်ခိုဈေးကွက်လည်းပျောက် စားသုံးသူလက်ထဲလည်း တိုက်ရိုက်ရောက် တိုင်းပြည်လည်း ၀င်ငွေတိုး ဈေးနှုန်းလည်းတည်ငြိမ်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစိုးရက ဒီဇယ်ဈေး မတက်ခင်ကကိုဘဲ အပြင်မှာ က ၃၂၀၀ လောက်ပေါက်တာကို ၃၀၀၀ နဲ့သာ လိုသလောက်ရောင်းပေးနိုင်ရင် ဈေးနှုန်းငြိမ်တာပေါ့အရင်ထဲကိုက ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ဟိုင်ဝေးခရီး သွားလုပ်ငန်းတွေက အပြင်ဆီပေါက်ဈေးနဲ့ယူထားကြတာဆိုတော့ လိုသလောက်သာရောင်းနိုင်ရင် transportation cost လည်းမတက် တိုင်ပြည်ဝင်ငွေလည်းတိုးပေါ့နော်....
နောက်ဆရာကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်ကြည် ပြောသလိုပေါ့လေ အစိုးရက ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ Inflation ကို
ုထိန်းနိုင်အောင် ဒီလိုဆုံးဖြတ်မှုမျိုးကို လုပ်တာဆိုရင် အထက်ပါနည်းလမ်းများနှင့်ကုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် Inflation ကို အလိုလျှောက်ထိန်းနိုင်သွားလိမ့်မယ် သေချာတယ် ဗျာ။ လောလောဆယ်ကားဈေးတွေ ပြုတ်ကျသွားမယ် ကာဝယ်ပြီး Invest မလုပ်တော့ဘူး ဒါဆိုဒီကထွက်လာတဲငွေတွေဟာ တခြား စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ကို flow ဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့ ငွေကြေးလှည့်ပါတ်မှုကောင်းလာမယ် ဒါဆိုရင် ငွေသေတွေက နေ လုပ်ငန်းတွေမှငွေရှင်တွေအနေ နဲ့ လှည့်သွားရင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပြဿနာတွေလည်း ပြေလည်နိုင်တယ် လို့ထင်ကြောင်း.....
ယင်းသုံးသပ်ချက်များမှာ လက်တလောအခြေနေပေါ်တွင်မှီတည်ပြီး သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် အမှား မှန်ကို
ကျနော့်အနေနဲ့ သေချာစွာ မပြောနိုင်ကြောင်း ဒါကြောင့်အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေနွေးခြင်းဖြင့် ယင်း ဆူနာမီ effect အတွက် အကောင်းဆုံး ကုစားနည်းလေးကို
ရနိုင်စေရန်ရည်ရွယ် ကာ ရေးသားခြင်းသား ဖြစ်ပါသည်.................
posted by KO WAI @ 12:19 PM
philtre သို့ 
စကားပါ... စစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးက အနက်တမျိုးတည်း
ကိုမဆောင်ပါဘူးရှင်... ကျွန်မနာမည်ကလည်း မြသားစစ်တဲ့ .. အမေကပေးထားတဲ့နာမည်မှာ စစ်ဆိုတာပါတာနဲ့ဘဲရှင့်၇ဲ့ ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုခံလိုက်
၇တာ သိပ်တော့ မနိပ်လှတာအမှန်ပါ... ဒါပေမဲ့ လည်း
ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဒီနာမည်နဲ့ကျွန်မေ၇းချင်တာကို ၀င်ေ၇း၇င် တုန့် ပြန်မှု က ဘယ်လိုနေမလဲသိချင်
စိတ်ကြောင့်သုံးလိုက်တာ ခံ၇တော့ခက်သား .....
ကျွန်မမှာ ညီမရှိခဲ့ ၇င်တောင်မှ၇ှင်လောက်ရိုင်းတဲ့သူကို
အထီးမှန်းအမမှန်းမသိ လေသံဖမ်းပြီး ၇မ်းတုတ်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အကျင့်လေးကိုတော့ပြင် ပါအုံး
9/02/2007 8:11 PM
မြသား.. စစ် မစစ် မသိပေမဲ့..
မင်းလဲပဲ တတပ်တအား… ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိပါတယ်…
ကိုယ်လေ့လာ မိသလောက်တော့… ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသမျှ
အကြောင်းတရားတိုင်းဟာ… အဆိုးမြင်ဝါဒ သက်သက်နဲ့ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး…
မေဓါဝီ… ဖြူသလား… မဲသလား.. ပုသလား.. ၀သလား.. ကိုယ်မမြင်ဖူးဘူး..
သူရေးသားတဲ့ သဘောတရားအယူအဆကို လက်ခံနှစ်သက်ရုံသက်သက်ပါ…
မင်းအနေနဲ့ အခံရခက်သလိုမျိုး… ဝေဖန်ချက်ပေးလေတော့…
သူ့လူကိုယ့်ဖက်သား… စမူဆာလို… သုံးဖက်ချွန်များလားလို့ သံသယ
၀င်မိပြန်ရော… နောင်လာမဲ့ အာဏာရပါတီကိုလဲသဘောမကျဆိုတာကတော့
သိပ်ကို Negative ဆန်လွန်းပါတယ်… ဘယ်သူ.. ဘယ်ပါတီ.. ဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်စီမံမှန်း.. အတိအကျမသိရသေးခင်ကာလမှာ..
မြသားစစ်က… ဘ၀တပါးမှာဖြစ်နေတဲ့ မိစ္ဆာ ၀ိညာဉ်လို အသိအမြင်တွေရနေလို့လား?..
မြ.. ဆိုတဲ့မင်းအတွက်.. ရွှေဖြစ်ရမဲ့ ဖူးစာကံမျိုး ကိုယ့်မှာပါခဲ့ရင်တောင်…
ခုလို မတော်တဆ ထိခိုက်မိတဲ့ ကွန်မန့်အတွေ့အထိမှာပဲ အဆုံးသတ်ပါရစေလို့..
9/02/2007 11:18 PM
Anonymous ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ကျွန်တော်က စစ်ကိုတုံ့ပြန်သူပါ။ ကျွန်တော်က မမေရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။
စစ်ရဲ့ကောက်ချက်မှာ စာရေးသူကိုပုတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတော့ ကွန်မန့်ဝင်ရေးလိုက်တာပါ။ စစ်ပြောသလိုပါပဲ။
ဘလော့ဂါတယောက်က သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သူတင်ချင်တဲ့စာ တင်ခွင့်ရှိသလို လာဖတ်တဲ့လူကလည်း မြင်ချင်သလို မြင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ကောင်းတယ်ထင်ရင် ချီးကျူးမယ်၊ အမြင်မတူတာတွေ့ရင် ဝေဖန် ထောက်ပြမယ်၊ အဲဒီအမြင်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂ်မှာ
မှတ်ချက်ရေးပြီး ထားခဲ့ချင်ထားခဲ့နိုင်သလို မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်ကနေလည်း ပို့စ်တခုအနေနဲ့ ချေပ တင်ပြခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ။
ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ နောက်ကိုစေးထူးပြောသလို "စာပေဝေဖန်ရေး လုပ်တာဟာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စာရေးသူ ပုတ်ခတ်ရေးကတော့ မကောင်းပါဘူး။
လူတိုင်းမှာ အမြင်အမျိုးမျိုးရှိသလို… မိမိအမြင်ကိုလည်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်… ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပြည်တွင်းက စာနယ်ဇင်းတွေမှာထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိလို့…
မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့စာမျက်နှာမှာ ထုတ်ဖော်ကြပါတယ်…" နောက် Philtre ရဲ့ "ကိုယ်လေ့လာ မိသလောက်တော့… ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသမျှ
ဒီလိုပြောလိုက်လို့… ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုက်ပြောတယ်မထင်လိုက်လေနဲ့…" ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်သည် မမေဓာဝီရဲ့
စာဖတ်ပရိတ်သတ် တယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ၊ဂိုဏ်းစွဲ ရှိလို့ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ မမေကိုလည်း လူချင်းမသိပါ။ စစ်ရဲ့ကွန်မန့်မှာ စာရေးသူကိုပုတ်ခတ်ထားတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်မိတာပါ။
နောက် အမည်မသိတစ်ယောက် ကွန်မန့်ဝင်ပေးထားတဲ့ "ဒီလိုလေးဆို အဆင်ပြေမလား" ပို့စ်ကိုလည်း ထောက်ပြစရာတွေရှိတာကြောင့် လက်မခံပါ။
"ဒီလိုလေးဆို အဆင်ပြေမလား" ပို့စ်ကို ချေပထားတဲ့ ကွန်မန့်တခုရှိပါတယ်။ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။
9/03/2007 9:15 AM
အငိးပြော၇၇င်တော့ကျမတော်တော်တုံးတယ်လို့ဘဲဆို၇တော့မှာပေါ့ ..... ကျမပြောတဲ့ နောင်လာမဲ့ အာဏ၇ပါတီဆိုတာ NLD ကိုဆိုလိုတာလေ ... ကျမကတော့ ဒီလိုဘဲနားလည်မိတာလေ ... ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ထားတာ မဟုတိဘူးလား ....အခုအစိုး၇ကိုမကြိုက်ဘူး ဒါပေမဲ့ အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန်တာ မတွေ.သေးလို့ပါဝင်ဆွေးနွေးမှာပါ...ရှင်ဆို၇င် စစ်ဆိုတဲ့နာမည်တလုံးပါမိတဲ့ ကျမကို ခွေးနဲ့ တောင်ိနိူင်းခဲ့သေးတာဆိုတော့ အဲလိုတော့လည်း ရှင့်လိုမျိုး ကျမအပြုသဘောမဆောင်တတ်သေးလို့ ပါ.... ကျမပြောမဲ့မကြိုက်၇ချင်းအကြောင်းကိုဝေဖန်၇င်လည်း
ရှင်.စံချိန်နဲ့ ဆို၇င် ဘောင်ဝင်မှာမဟုးတ်သေးဘူး..... ကျိုးစားပြီးတော့
9/03/2007 10:01 AM
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တုံးမှန်းသိသွားတဲ့အတွက် (၀န်ခံတဲ့အတွက်) ၀မ်းသာမိပါတယ်။
အထက်က ကွန်မန့်မှာ “စစ်ခွေး” လို့ သုံးနှုန်းလိုက်ရခြင်းဟာ မြသားစစ်ကို စစ်ဘက်က ထင်လို့ အလင်္ကာလည်း မြောက်သွားအောင် ဒီစကားလုံး သုံးလိုက်ခြင်းပါပဲ။
စစ်ခွေးဆိုတဲ့ စာလုံးဟာ ရူပကအလင်္ကာဖြစ်ပါတယ်။
စစ် ဆိုတာ စစ်သားပေါ့။ စစ်သားဆိုတာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံကို လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ရတယ်။ ကျူးကျော်လာသူတွေကို ကာကွယ်ပေးတယ် မဟုတ်လား။
ဒီလိုပါပဲ ခွေးဆိုတာကလည်း ကိုယ့်အိမ်ကို လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ရတယ်။ သူခိုး သူဝှက်ရန်က ကာကွယ်ပေးတယ်လေ။
ဒါကြောင့် ဒီလို ဂုဏ်ရည်တူစကားလုံးချင်း ထပ်တူပြုပြီး အလင်္ကာမြောက်အောင် ရေးလိုက်မိတာမို့ … ရင့်သီးကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရင် (ဒါမှမဟုတ်) စစ်ဘက်က မဟုတ်ခဲ့ရင် ဒီစကားလုံးကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပေးပါတယ်။
နောက်တခုက … ကိုယ့်တယောက်ထဲကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြောချင်ရင် ကိုယ့် ဂျီမေးလ်အကောင့်ကို ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အပြန်အလှန် အချေအတင် ပြောဆိုကြရင် ဘလော့ရှင် အပါအ၀င် သူ့စာသက်သက်ကို လာဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူများကို အားနာဖို့ ကောင်းလို့ပါ။ ဆက်လက် ဆွေးနွေးဖို့ စိတ်ကူးရှိရင် ဒီမေးလ်ကို add နိုင်ပါတယ်။
မင်းထင်သလောက် ကိုယ်မရိုင်းသလို… မင်းမဆိုးရင်.. ကိုယ်ယဉ်ကျေးပါတယ်…
မြဆိုတဲ့မင်းအတွက်… ရွှေဖြစ်ရမဲ့ဖူးစာကံ ကိုယ့်မှာပါခဲ့ရင်… စစ်ဖက်က မဟုတ်တဲ့ မြသားစစ်အတွက် ရွှေသားစစ်စစ် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်….
oversea ကမို့ တခြား messenger account သုံးရင်လည်း…
newthibaw@yahoo.co.uk နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်…
9/03/2007 1:05 PM
ကို anonymous (ဆီအကြောင်းဆွေးနွေးသူ) စဉ်းစားပြသွားတာလေးက အတော်သဘာဝကျပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ စေတနာထားတယ်ဆိုရင်၊ တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ခုခုအပြောင်းအလဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို အဲလိုပဲ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကို anonymous ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဈေးတက်တာပါမလာပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒါလေးပါ ထည့်ပြီးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။